လျှောက်လွှာများ GISONAir Tools များ
Pneumatic ကိရိယာများသည် အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိသည်-
1. သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးသော ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုပ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် ပါဝါကိရိယာများ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ လေကိရိယာများ။
6. ပါဝါကိရိယာများ၊ လေကိရိယာများ၊ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ (လေကွန်ပရက်ဆာများနှင့် လေလိုင်းများ စသည်ဖြင့်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
7. Air tools များသည် အရှိန်နှင့် torque အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ရန် inlet pressure/ flow ကို အားကိုးပြီး intake pressure လျော့နည်းသွားသောအခါ speed လျော့နည်းသွားကာ torque လည်း သေးငယ်သွားပါသည်။ အမြန်နှုန်း နိမ့်နိုင်သော်လည်း စားသုံးမှုအား ချိန်ညှိရန် ယေဘူယျလေထိန်းကိရိယာကို အသုံးပြုသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ရုန်းအား သေးငယ်သွားစေသည်။ Air compressor နှင့် gas tank သည် အလုံအလောက်မကြီးပါက pneumatic tools များအသုံးပြုခြင်းဖြင့် gas မရှိခြင်းအတွက် ဖိအားကို တည်ငြိမ်အောင် မထိန်းထားနိုင်ပါက tool power လုံလောက်မှု မရှိပါ။
GISONစက်ယန္တရား Co.,Ltd. 48 နှစ်ကျော် ထိုင်ဝမ်ရှိ စက်ရုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးဝေခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် လေတူးလ်၊ လေကိရိယာများ၊ အမှုန်အမွှားကိရိယာများ၊ အမှုန်အမွှားကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံး Air Tools/ Pneumatic Tools များ ထုတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်နေပါသည်။ Air Tools ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ကားရောင်းချသူများ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ၊ ဝယ်ယူသူများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် Air Tools OBM/ODM/OEM တို့မှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Air Tool ၊ Air Tools ၊ Pneumatic Tool ၊ Pneumatic Tools များကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ ယခု ပဲ ဆက်သွယ် လိုက်ပါ။
Air Tools / Pneumatic Tools များသည် ကျောက်လုပ်ငန်း၏ စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ စိုစွတ်သောအလုပ်သည် ကျောက်တုံးများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထုတ်ပေးသည့်ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ဘေးကင်းရေးပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်သည်၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်သည့်အခါ စိုစွတ်သောလည်ပတ်မှုပြဿနာ၊ pneumatic ကိရိယာများ၏သက်တမ်းကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်မှု၊ မော်တာအပူလွန်ကဲမှုမရှိခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသော အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။ ကျောက်လုပ်ငန်း။